Sprout Social: Mụbaa itinye aka na Social Media na nke a na-ebipụta, Ntị, na Nkwado Platform | Martech Zone
Sprout Social: Mụbaa itinye aka na Social Media site na mbipụta mbipụta, ịge ntị na nkwado a.
Ị sorola nnukwu ụlọ ọrụ n'ịntanetị naanị ka ị nwee nkụda mmụọ maka ogo ọdịnaya ha na-ekerịta ma ọ bụ enweghị njikọ ha na ndị na-ege ha ntị nwere? Ọ bụ akara ngosi, dịka ọmụmaatụ, ịhụ ụlọ ọrụ nwere iri puku kwuru iri puku ndị ọrụ yana naanị òkè ole na ole ma ọ bụ mmasị na ọdịnaya ha. Ọ bụ ihe na-egosi na ha anaghị ege ntị ma ọ bụ na-anya isi maka ọdịnaya ha na-akwalite.
The gia nke social media ọdịnaya mmepụta ekwesịghị ịbụ gia ma ọlị. Dịka ị gaghị abanye na mmemme ịkparịta ụka n'Ịntanet, nyefee kaadị gị n'aka onye ọ bụla, ma pụọ ​​​​na-agwaghị onye ọ bụla okwu, i kwesịghị ime nke ahụ na mgbasa ozi mgbasa ozi. Mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị egwu maka ụlọ ọrụ ịmụta ihe ndị na-ege ha ntị na-eche banyere ha, kesaa ihe ọmụma bara uru, ma na-eto eto nke atụmanya na ndị ahịa ghọtara na ika ahụ na-eche banyere ha n'ezie.
N'ezie, nke a chọrọ mgbalị. Ijikwa ọnụnọ mgbasa ozi ọha na eze n'ofe ikpo okwu nwere ike ịgwụ ike - yabụ ịchọta ikpo okwu nwere ike inyere gị aka dị mkpa.
Okpukpe Social bụ onye ndu ama ama na ojiji, nkwado ndị ahịa na afọ ojuju, ROI na nkuchi onye ọrụ, dịka saịtị nyocha sọftụwia dị elu nyere ya. Ha nwere ihe karịrị ụdị 30,000 na otu dị iche iche na-eji ikpo okwu ha.
Ha niile na-elekọta mmadụ media management ikpo okwu na-enyere ụdị aka imeghe zuru ike nke na-elekọta mmadụ media mgbanwe ha na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ahịa, na-elekọta mmadụ ahịa ọrụ, nakwa dị ka iwu nkwado online iji ndị ọrụ na influencers. Ikpo okwu nwere atụmatụ isi ndị a:
Ntị na-elekọta mmadụ - Ghọta ndị na-ege gị ntị, kpughee usoro, wee nweta nghọta na-arụ ọrụ site na data mmekọrịta iji mee ka akara gị na atụmatụ azụmaahịa gị mara.
Mbipụta Social Media - hazie, hazie, hazie ma wepụta ọdịnaya dị ka otu ndị nwere mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ntinye aka na mgbasa ozi - megharịa nlebanya ọha na eze ma kwalite nzaghachi site na igbe mbata jikọtara ọnụ iji soro ndị obodo gị na-emekọrịta ihe n'ofe nyiwe mgbasa ozi ọha.
Nchịkọta Mgbasa Ozi - jiri data mmekọrịta ọha na eze bara ụba na dashboard jiri mkpebi siri ike mee mkpebi n'ofe azụmahịa.
Mgbasa ozi mgbasa ozi - wulite akara gị n'ịntanetị site n'inye ndị ọrụ gị ụzọ dị mfe iji kesaa ọdịnaya ewepụtara n'ofe netwọkụ mmekọrịta ha.
Ma ị bụ onye njikwa mgbasa ozi mmekọrịta, onye ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi, onye nnọchi anya nlekọta ndị ahịa na-elekọta mmadụ, onye nyocha, ma ọ bụ onye strategist - Okpukpe Social na-enye ngwaọrụ niile ịchọrọ iji wuo, megharịa, na kwalite atụmatụ mgbasa ozi mgbasa ozi gị.
Malite Ọnwụnwa Ọha na-akpata Sprout n'efu
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Okpukpe Social na m na-eji njikọ njikọ m n'oge post a niile.
Tags: na-elekọta mmadụ na-ege ntịelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozinchịkọta mmadụ mgbasa ozikalenda mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi asọmpi ọgụgụ isintinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụmgbasa ozi mgbasa oziSocial Media Marketingmgbasa ozi mgbasa ozipuo na-elekọta mmadụChidinma
Douglas Karr Monday, April 25, 2022 Monday, April 25, 2022
Movavi: Ụlọ ihe na-edezi vidiyo maka obere azụmaahịa iji mepụta vidiyo ọkachamara
Postaga: Mgbasa ozi mgbasa ozi ọgụgụ isi nke AI kwadoro